Ishibhile se-Acrylic fiberglass Indwangu ifektri kanye nabaphakeli | UChengyang
Indwangu ye-Acrylic fiberglass yenziwa ngentambo eqhubekayo ye-fiberglass.Yibushelelezi, ithambile futhi icwecwe.Isebenza ngokuvelele: isisindo esiphansi, amandla aphezulu, ukumelana nokushisa okukhulu, ukumelana okushisayo, okungathumeki, ukulwa nokugqwala, ukufakwa okuhle kwe-exectrial, ukuvikelwa kwemvelo. Ingilazi yefayibha ingaphezulu imbozwe i-acrylic acid nezinye izinto ezikhethekile zokulinganisa ukulungisa imigqa, ithuthukise ukumelana kokugqoka kwendwangu, futhi ithuthukise kakhulu ukumelana nowoyela, ukumelana ne-solvent kanye nokumelana nokushisa okuphezulu kwendwangu yengilazi yefayibha.
Indwangu ye-Acrylic fiberglass yenziwa ngentambo eqhubekayo ye-fiberglass.Yibushelelezi, ithambile futhi icwecwe.Inamsebenzi ovelele: isisindo esiphansi, amandla aphezulu, ukumelana nokushisa okukhulu, ukumelana okushisayo, okungathumeki, ukulwa nokugqwala, ukufakwa okuhle kwe-exectrial, ukuvikelwa kwemvelo. Ingilazi yefayibha ingaphezulu imbozwe i-acrylic acid nezinye izinto ezikhethekile zokulinganisa ukulungisa imigqa, ithuthukise ukumelana kokugqoka kwendwangu, futhi ithuthukise kakhulu ukumelana nowoyela, ukumelana ne-solvent kanye nokumelana nokushisa okuphezulu kwendwangu yengilazi yefayibha.
1) zokushisela ingubo
2) Ipayipi lomlilo
3) Ukushisa nokuvikela imikhiqizo yokushisa
4) Umkhono wokugcina ukushisa otholakalayo
Izikhwama eziningi + izikhwama ezilukiwe
Izikhwama eziningi + amabhokisi
Olandelayo: Acrylic Camera fiberglass
Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu, Indwangu i-fiberglass, Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass, Indwangu ye-Acrylic fiberglass, Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized, Acrylic Camera fiberglass,